Global Voices teny Malagasy » Mifampitantana Ny Homofôbia Sy Ny Tahotra ‘ Hery Vahiny’ Ao Shina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Jolay 2016 6:59 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT)
Fangataham-badin'ny mpisipa vavy sy vavy ampahibemaso tao amin'ny Oniversite Fianarana Teny Vahiny ao Guangdong ny 21 Jona. Sary avy amin'ny bilaogin'ny Miralenta ao Shina.
Toe-javatra iray vao haingana no mampiseho fa mifampiditra indraindray ao Shina ny tahotra fahapelahana sy ny tahotra hery vahiny.
Tamin'ny 21 Jona, nanao fitoriana fitiavana teo imasom-bahoaka ny mpisipa mpifankatia vavy sy vavy avy ao amin'ny Oniversite Fianarana Teny Vahiny ao Guangdong taorian'ny lanonana fizarana diplaoma. Tsy ela akory dia nalaza be tao amin'ny sehatra media sosialy Shinoa WeChat sy Weibo ny sarin'ny oroka mamin'izy ireo sy ny vaovaon'ny fangatahana . Nidera ny fanehoam-pitiavana ny olona nanatri-maso ary nitso-drano azy ireo.
Fa nony avy eo , tamin'io andro io ihany, nesorin'ny mpanao sivana tanteraka ny sarin'ilay fandrakofana fitoriana fitiavana teo imasom-bahoaka tao amin'ny kaonty hitan'ny daholobe Wechat an'ny vondron'olona vavy tia vavy, sady lahy no vavy, lahy tia lahy, ary ny nanova fitaovam-pananahana (LGBT) ao Guangzhou antsoina hoe Sipa. Nofafana ihany koa ny fandefasana vaovao mifandraika tamin'izany tao amin'ny Weibo izay navoakan'ny Vondrona feminista ao Guangzhou antsoina hoe Fifohazam-Behivavy  .
Voampangan'ny ‘fanaraha-maso fikambanana tsy ara-dalàna’
Norahonan'ny Sekretera Lefitry ny Komitin'ny Antoko Komonista Shinoa tao amin'ny Oniversite i Wang Xiaoyu ,iray amin'ireo vehivavy fofombady,fa tokony hahazo sazy fifampifehezana izy noho ny “fitondra-tena ratsy.” Namoaka lahatsoratra mitantara indray ny zavatra niainany taorian'ilay fitoriana fitiavana teo imasom-bahoaka tao amin'ny bilaogin'ny vondrona feminista Miralenta ao Shina i Wang tamin'ny 28 Jona :
Wang Xiaoyu no anarako, vavy tia vavy aho. Samy nahazo diplaoma 2016 tamin'ny Fianarana Teny Vahiny tao amin'ny Oniversiten'ny Guangdong izaho sy ny sipako. Nanararaotra ny lanonana fizarana diplaoma izahay mba hivoahana tao amin'ny miafina ary hiseho ampahibemaso amin'ny fiarahana amin'ny alàlan'ny fitoriana fitiavana. Tianay mba ho hita ny fifankatiavana miafin'ny mpitia amin'ny fitiavana vitsy an'isa, mba handrisihana fifanakalozan-kevitra sy fandinihana ary hanorenana tontolo misokatra sy marolafy ao amin'ny tontolon'ny oniversite. […]
Tsy ela taoriana [fitoriana fitiavana ampahibemaso], nitady resaka tamiko fatratra ilay mpitantsoratra lefitry ny sekoly, ny Sekretera Du. Tsy tiany intsony aho hiresaka amin'ny fampitam-baovao, ary hanajanona izany mba tsy hisian'ny “fiantraikany ratsy ” ho an'ny sekoly. Nampirisika ahy izy “hiaro tena amin'ny fanalam-barakan'ny fampitam-baovao”, ary manahy izy fa hanome fanamarihana ahy ny “fampitam-baovao vahiny” miaraka amin'ireo “teti-dratsiny” sy ireo hery vahiny, ka hitady ahy.
Hoy i Sekretera Du tamiko: “Be loatra ny lahy tia lahy sy vavy tia vavy eto amin'ny manodidina, tsy misy manavakavaka azy ireo satria mahafantatra ny fomba handanjalanjany ny fiarahany izy amin ‘ny fomba izay tsy hampisy na hitondra fiantraikany ratsy ho an'ny hafa.
Tamin'ny taon-dasa, nandritra ny faha-50 taonan'ny oniversite, niara-nanao ny fombafomba mariazy ny mpivady lahy sy vavy miisa 50. Tsy nisy nieritreritra mihitsy fa mety hitondra fahavoazana ho an'ny hafa ny fihetsik'izy ireo […]. Koa nahoana ny fanehoam-pitiavana eo amin'ny olona LGBT no hitondra fiantraikany ratsy ho an'ny hafa?
Nalain'ny mpitan-tsoratra lefitra ny diplaoman'i Wang tamin'ny 22 Jona mba hakana antoka fa tsy hiresaka amin'ny fampitam-baovao izy. Nanery ireo ray aman-drenin'i Wang koa izy, ka nilaza tamin'izy ireo fa eo ambany fifehezan'ny “fikambanana tsy ara-dalàna ” ny zanany vavy ka nangataka azy ireo mba hitatitra amin'ny polisy fa “tsy hita ny zananivavy “, mba ahafahan'ireo polisy miditra ao an- tranony, ary hitady ny porofo amin'ny fifandraisany amin'ny fikambanana tsy ara-dalàna.
Tsy niverina tamin'i Wang ny diplaomany raha tsy tamin'ny 28 Jona rehefa nangina nandritra ny herinandro izy, ary nanafoana ny dia famitana iraka. Faly ilay mpitantsoratra lefitry ny sekoly fa voafehy ny toe-draharaha :
Nilaza tamin'ny fianakaviako tamin'ny fomba matotra i Sekretera Du fa nandray anjara tamin'ny hetsika tsy ara-dalàna sy tsy mendrika aho, izay hisy fiantraikany lehibe amin'ny hoaviko. Hoy izy hoe tena mpianatra mendrika aho kanefa niova. Najanoko hankanesana any amin'ny ray aman-dreniko ny dia famitana iraka nampanaovina ahy, ary hitan'izy ireo ho “fiovana ho amin'ny tsara kokoa” izany , “fifohazana vaovao indray.” Mety hanampy azy hilaza fa nandresy tamin'ny zavatra tsy nitranga akory ny eritreriny. Tsy niraharaha ny fomba nandratrany ahy izy.
Tsy afaka nifandray intsony tamin'ny fianakaviako aho ary tsy afa-manoatra satria nilaza tamin'ny fianakaviako izy fa “eo ambany fanaraha-mason'ny fikambanana tsy ara-dalàna iray aho”. Nandraraka lasantsy tamin'ny fifandraisako sy ireo ray aman-dreniko izay efa mihenjana izy ary ankehitriny, dia rava ny fifampitokisana teo anivon'ny fianakaviana […]
‘Mahereza miresaka momba ny fitiavana’
Nandefa selfie tao amin'ny media sosialy  ny vondrona LGBT mba anehoana ny fanohanany rehefa nahita ny zavatra nahazo ireo mpisipa vavy sy vavy.
Milaza ny sora-baventy hoe :”Rankizy, tsy misy ifandraisany amin'ny fitiavana marina ny fifankatiavan'ny manana fananahana mitovy. Mahereza miresaka momba ny fitiavana.” Sary avy amin'ny vondrom-pianakaviana mpanohana ny LGBT ao amin'ny weibo.
Nanao antso ho an'ny mpiserasera ny vondrona feminista Miralenta ao Shina mba handefa ny sarin'ireo fitoriana fitiavana ho an'ny mitovy fananahana eo imasom-bahoaka hiadiana amin'ny fankahalàna ireo mpifankatia manana fananahana mitovy. Ireto ambany ireto ny sary sasany amin'ny iditra :
Hoy ny sora-baventy : ” Mitovy ny fangataham-bady ho an'ireo mpifankatia mitovy fananahana sy ny mpifankatia samy hafa fananahana .” Sary avy amin'ny Miralenta ao Shina.
Hoy ny sora-baventy: “Mitovy ny fangataham-bady ho an'ireo mpifankatia mitovy fananahana sy ny mpifankatia samy hafa fananahana.” Sary avy amin'ny Miralenta ao Shina.
Hoy ny sora-baventy: “Mitovy ny fangataham-bady ho an'ireo mpifankatia mitovy fananahana sy ny mpifankatia samy hafa fananahana.” Sary avy amin'ny Miralenta Shina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/07/04/84768/
 mitantara indray : http://weibo.com/1715958523/DCDv25Hsw?refer_flag=1001030103_
 Nanao antso : http://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309403992089158413395